RW. Khayre oo Muqdisho siwayn loogu soo dhoweeyay Kadib Safarkii Qadar (Daawo) | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
RW. Khayre oo Muqdisho siwayn loogu soo dhoweeyay Kadib Safarkii Qadar (Daawo)
Jul 5, 2020 - 19 Aragtiyood
Muqdisho ( Kalshaale ) Ra’iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo safar shaqo ugu maqnaa dalka Qatar ayaa galabta dib ugu soo laabtay dalka.
Waxaana Garoonka Diyaaradaha ee Aadan Cadde Raysal wasaaraha kusoo dhoweeyay Wasiirro, Xildhibaanno iyo mas’uuliyiin ka tirsan Dawladda.
Kheyre ayaa safar maalmo badan qaatay ugu maqnaa dalka Qadar, waxaana maalmihii lasoo dhaafay warar kala duwan kasoo baxayeen safarka uu u tagay Qadar oon inta badan warbaahinta aan lala wadaagin.
Waxaa Xusid Mudan inuu Warbaahinta kasoo Muuqday Raysal wasaare Khayre intuu ku sugnaa dalka Qadar Markii ay soo baxayeen Warar aan Jirin oo laga faafiyey Xaaladiisa Caafimaad.
Ra’isul Wasaaraha Soomaaliya ayaana soo dhaweyntiisa maanta ka duwaneyd kuwii hore, waxaana inta badan marka uu dalka kusoo laabto soo dhaweyn jiray xubno yar oo wasiiro iyo shaqaalo katirsan xafiiskiisa ah.
Soomaaliya ayaa waxaa dhowaan kusoo Fool leh doorashooyin ay dood ka taagan tahay Qaabka iyo Xiliga ay Qabsoomayaan, waxaana dawladda Qadar ay kamid tahay dalalka sida wayn u taageera Xukuumadda Soomaaliya ee Tallada haysa Xiligan.
Qadat Qatal maxaad ka keentay,
1. Turkey Hala Qarxiyo
2. Goof Wacbuudhan Nabad haloo diido
3. Dooli iyo Doorshaan ha xamaasheen.
Kheyre waxaa kugu socdo Kharash iyo Waqti, ee ama rag iska dhig oo Doorashada ku qabo waqtigeeda ama Daldalo Canshuurta Eedo Batuulo.
* Qabyo iyo Kharash waaye faa’iidada Qurbo joogta Xanaaqsan
Dabshid waa QARAN dumiski laga guuray. WBT
Miyuu is casili doonaa xoogaagii Qatar kusoo laaluushtey haddii lasoo siiyey?
Mise lacagi waa cunis buu odhan doonaa oo khilaafkii iyo musharaxnimadiisii ayuu sii wadi doonaa?
Hawiye ma booska Khayre inay nin keenaan iyo 13 ilma gareen ah oo Farmaajo siiyey ayay ku qanci doonaan?
Koley xaalka maalmaha soo socda ayaa la kala ogaan.
Anaku waxaa ku jirnaa “allow alaba dibi isku jaanjaan oo mid noo jebi aanu jiljilanee”
Kanina waa nooca Dabshid oo faaìdo maleh. ≈©≈Kaga darane waa Mid aan Aqiiro rajjo ka qabin bal day wuxuu yiri; “xoogaagii Qatar kusoo laaluushtey” Bal ISLAAMEY siduu ku ogaaday ma isaga la joogay?. WBT
Kuwii hore waxaba way cunijireený oo mahanbeeye bay ahaayeen oo care Kurdish laga ma helijirin. Kuwanse20% Haddii at Canaan was u walaal,sidaas darted buy shacabku ku rabaan.
Nabad iyo nolol ma ihisyaasad Shaa laakiin, wadaninimo baan ku taageeray
Qatar wuxuu ku tagey arin caafimaad.
Laguma soo dhaweyn maqaam wanaagsan.
Kulan Amiirka Qatar iyo wasiirka arimaha dibadda midna lama aanu yeelan.
Waxaa halkaa ka muuqata Qatar inaaney Khayre wax la wadin.
Fahad Yaasiin iyo Farmaajo ayaad moodaa inay Qatar dhegta wax uguu sheegeen taas oo ay la dhacday kaliftayna inaaney Khayre iyo safarkiisa qiima ugu fadhiyin.
Waxa ay ku wada hadleen ma naqaan laakiin waxaa hubaal ah in Khayre dhabarka ay u jeediyeen Qatar iyo Milkiilaha Villa Wardhiigley Fahad Yaasiin.
Khayre ma wiigagiisii ugu dambeeyey ayuu ku jiraa oo daadka ayaa qaaday oo arintaa waxaa iska kaashaday Qatar Fahad Farmaajo iyo Hawiyaha mucaaradkaa mise wxuu noqon doonaa nin miciya lasoo baxa oo cadkiisa cuna?
“Waxuun baan sugi dhegta ayaana ii taagan maalmaha soo socd”
DHEG HAW DHIGIN °WAA SHAYDAANKI DIRADI-RAALAHA AHAA XAANGE IYO CALWASAADKIISI. WBT
Adiga siyaasada soomaalia maxaa kaaga Jira soo axdigii carooday mise wax kumaslaxeeya oo ku sasaba ayaad weyday meeshaada naga joog cidna kuuma baahnee
“Usoo aroor aadan yabaal abaalna kuuma eganee”
Maalmihii Farmaajo waa tirsanyihiin dadkiina waad isku didheen hadaad ilkayar tihiin.
Maalmo siyaasadeed oo cakiran ayaa kusoo wajahan Farmaajo oo awalba ahaa inan layaal googarada Seynab ku hoos jira.
Now isaga iyo Khayre iskuma wanaagsana.
Googarada Seynab inta lagala soo baxo in birta laga aslo hawiye caana uma kabadaan.
Bal ilkayareey markaa ayaan idin ogaan inaad wax u qaban kadhaan Farmaajo.
Maanta waxaan daawanayey Ugaaskiinii oo barooranaya ma aanan moodeyn in Axmed Masoobe Kismaanyo sii joogayo waxaan islahaa waa la dili,isdhiibi ama wuu baxsan laakiin intaa midna ma dhicin isagoo ku barooranaya.
Ilkayarta inta xalaashaa ee Kismaanyo Joogta oo madaxweyne ku xigeenku ka mid yahay inaad isu dhiibtaan idinkoo gun jabtay ah ayaan sugayaa maalmaha soo socda
Xaange, adeer war ma haysid ee mid ogoow Saynab WAXAA dhashay Bishaaro Aaden Yuusuf ANNA waxaa I dhalay Cilmi Yuusuf MARKA ruuxi Taabta Sayyidkeeda intuu iga geli Xitaa hadduu yahay Roble?. WBT
Anigu farmaajo kahor baan jiray oon waliba kuxukumijiray kuna karbaashi jiray marba meel isku xoq wallee reerka soomaali ugu takooran waa idinka oo meel walba baroorta iyo oohinta lataagan waxba ha is indho tirin mideeda kale farmaajoha aad sheegayso cabsida aad kaqabto ayaan layaabanahay malaha waxaad is tiri sidii 1978dii ayuu idiin karbaashi doonaa haduu soo laabto fulaynimo iyo muran badan ayaad isku darsateen..macno yare majeerteen muranle naagoodle kkkkk is daji waryaa
Mr kheyre laba wado ayaa u banaan.
1 In uu dhoho mudane seedi. Reer tolkeey 4 sano ayaan sanka kaaga tolay. Adigoon waxba kusoo kordhin. Ee markaan waa markeygii ee talada xisbiga iiga danbe.
2 in uu qaato talada farmaajo oo ah adigu herindiid ayaad tahay oo kursiga ma geysid ee Aniga gadaasheyda istaag markaan wax helo alla Hanna gaarsiyo.
Alla maxaa meesha jaaji iyo gaalgale cabaadaaya ina gumeed oo dhan waa miyir beeleen ilaa maseyr baa hayee,aragtaye maxaad oran,ma il baad wax kaga jarin.N&N waxba lagama qaban karo ee ilmada cesho baan ku niri.dawacaw biyo webi waa kaa xaaraan.
Madaxwayne farmaajo waa shaqsi sharaf iyo karaamo leh.
Ku qabyaalada jaahiliga weli ay wax wayn latahay,waxaa iga xasuusin ah in aad la timaadaan,caqli wanaagsan oo biniaadamko uu ka duwanyahay xoolaga,hadii waxaad ku sifoobaysan cudur aan daawo lahay.
Gedoland puntland Waa 1000 km in ka badan, waxaa ka taliyaa deni.
Farmaajo markuu suuliga galayo waxaa raaca ugandees ama Burundi.
Sorry daarood waxaa ugu liita jaalle MAREEXAAN.aaway dhulkii ilkoyar??????
Walaahi Waa idinka baxaa mustaqbal xumida iiga kiin muuqata,farmaajo waxuu idinku soo kordhiyay inuu qaxiyay ilkoyartii gedo sorry.
Dhashii Jabhadaha cay iyo aflaaddo un bay ugaga hadhay…
Waa dhuun yeeris, dalka in laga faramaroojiyay bay ogaadeen oo rag u kacay…
Ilaa iyo markaan dhashay baan maqlayay dhabayac lawya kuusan oo xaggeed gali, iyo waa laydin qaqabanta haya, walina buurtayadaa buuraha u dheer…
Geed kastoo aad fuushana anaa fiinta sare jooga… Dhabayacooy Iligyar heshiisay oo waa hal maanta, ha ku dagmina wallee sidu sidii ma aha…
Markaad xiniinya wayday miyaad kuwa mudalood amaahatay?. kkkkkk Ood Ogaadeenkaad isk soo hormarin jidhay u gaca haatisay?…
Wallaahi waan qoslay ku lahaa caano uma kabbadaan inay fillada ugu daadtaan… Miskiin…